🥇 ▷ Pocket Casts, dalabka codbixinta caanka ah, wuxuu noqdaa mid bilaash ah sagaal sano kadib markii la bixiyo ✅
Pocket Casts, dalabka codbixinta caanka ah, wuxuu noqdaa mid bilaash ah sagaal sano kadib markii la bixiyo
Haddii aan kahadalno codsiyada si aan u dhagaysanno cod-baahiyaha ma joojin karno ka hadalka Jeebka jeebka. Waxay ahayd tii ugu horreysay ee qaabkan loo tartamo soo noqoshada sanadkii 2010, markii la soo saaray nambarkiisii ​​ugu horreeyay, kaas oo, dabcan, la bixiyay. Oo sidaasay noqotey had iyo jeer, ama ugu yaraan inta lagu jiro sagaalkan sano ee nolosha. Laakiin taasi way is-beddeshay, adduunkana meela lagu diiwaangeliyay sidii nidaam monetization ah, Pocket Casts ma uusan dooneynin in laga tago: waxay u dhacdaa si xor ah oo ku dhawaaqista Pocket Casts Plus.
Tani waa waxa ay shirkaddu ku shaacisay daabacaad ku daabacan boggeeda rasmiga ah, halkaas oo aysan ka hadlin oo keliya in hadda app loo isticmaali karo bilaash, laakiin waxay bixiyaan sababta. Mar dambe ayaan ka wada hadli doonnaa isaga, laakiin marka hore waa la dhihi karaa arrintaas dhammaan howlaha ugu muhiimsan ee barnaamijka ayaa ku sii jiraya nooca xorta ah. Kaliya laba howlood oo hodan ah ayaa qayb ka noqon doona rukumashada iyo, ugu yaraan hadda, uma muuqato in barnaamijku muujin doono xayeysiis.
Haddii aad iibsatay barnaamijka waxaad heysataa seddex sano oo rukumo bilaash ah
Nooca bilaashka ah ee jeebabka jeebka ayaa lahaan doona dhammaan astaamaha lagu soo daray nooca lacagta lagu bixiyay.
U oggolow bilowga bilowga. Sababta ay u adeegsadaan jeebabka ‘Pocket Casts’ si ay xor ugu noqdaan oo ay doortaan rukumada ayaa ah sidaa darteed appku wuxuu gaaraa dad badan, wax dhibaato ah majiraan marka aad uga dhaqaaqeyso macruufka oo aad uga dhaqaaqdo Android iyo in noocyada cusub ee shabakadda iyo desktop ay leeyihiin kharash dayactir. Si kastaba ha noqotee, kaliya u qaado xisaabaadka qaar si aad u aragto in rukummadku uu dakhli ka helo adeegsigii halkii lacag bixin kaliya.
Jeebka jeebka ayaa lagu qiimeeyay 3.99 euro, lacag bixinta hal. Pocket Casts Plus, rukummada cusub, waxaa lagu heli karaa 1.09 euro bishii ama 10.99 euro sanadkii, marka afar bilood uu adeegsaduhu bixin lahaa u dhigma lacagta kaliya ee barnaamijka, bilaha intiisa kale waa dakhli dheeraad ah. Xusuusnow halkan haddii aad lacag ku bixisay inaad gasho websaydhka ama nooca desktop desktop ka hor, macno malahan goorta, waxay ku siin doonaan seddex sano Pocket Casts Plus.
Haddii aad rabto inaad gasho nooca shabakadda iyo barnaamijka desktop-ka waa inaad bixisaa rukummada
Lacag marka laga reebo, maxaa lagu samayn karaa nooca bilaashka ah ee ‘Pocket Casts’? Wax kasta oo lagu samayn karo nooca nooca lacagta ah, cad oo fudud. Shirkaddan baa leh, “Kama horjoogsaneyno wax shaqo ah oo hadda jira. Diiwaan galintu waxay u oggolaaneysaa marin u helista barnaamijyada desktop-ka iyo nooca shabakadda, mawduucyada iyo astaamo dheeri ah oo lagu beddelayo kuwa lagu rakibay sida caadiga ah iyo 10 GB ee kaydinta daruuraha si ay u geliyaan nuxurka oo ay ka dhegeystaan ​​Pocket Casts.
Horumariyayaashu waxay sheeganayaan taas wuxuu sii wadi doonaa inuu ku daro astaamaha nooca bilaashka ah iyo in “u iibin mayno ama wadaagi mayno xogtaaga kuwa saddexaad”. Waxay rabeen inay cadeeyaan in qaabkan ganacsi ee cusub uu noqon doono “isku dhafka taageeradayada aadka u xiisaha badan ee bixinta bixinta jeebka casriga ah iyo lacagaha lagu dallaco wada-hawlgalayaasha“.
Marka la soo koobo, Pocket Casts waxay noqonaysaa bilaash waxayna haddii aad rabto astaamo qaali ah sida desktop desktop ama kaydinta daruuriga ah waa inaad bixisaa 1.09 euro bishii ama 10.99 euro sanadkii, iyadoo kuxiran qaabka aad dooratay, ee Pocket Casts Plus. Kuwa iibsaday barnaamijkan waxay lahaan doonaan sedex sano oo bilaash ah Plus. Markay sidaas tahay, Pocket Casts waa barnaamij dhammaystiran oo dhammaystiran oo leh hawlo aan tiro lahayn, sidaa darteed xitaa haddii aad hadda leedahay rukhsad ayaa wali lagula talinayaa kuwa taageerayaasha muusikada leh oo si fudud u doonaya barnaamij shaqeynaya oo si habeysan loogu talagalay.
Soo saare: Warbaahinta Podcast
Ka soo dejiso at: Google Play
Ka soo dejiso at: App Store
Qeybta: Wararka iyo joornaalada
Via | Jeebka jeebka
Share Pocket Casts, dalabka codbixinta caanka ah, wuxuu noqdaa mid bilaash ah sagaal sano kadib markii la bixiyo